Wararka Maanta: Khamiis, Sept 27, 2012-Wasaaradda Waxbarashadda Somaliland oo ku dhawaaqday Natiijaddii Imtixaanka Shahaadiga ah ee Dugsiyada Somaliland
Xafladan lagaga dhawaaqayey natiijadda dugsiyadda sare iyo kuwa dhexe, waxa goob joog ka ahaa guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Qaranka Daa’uud Axmed Faarax, maamuleyaasha dugsiyadda sare iyo dhexe, waxaana halkaas lagaga dhawaaqay dugsiyada tobanka ugu sareeya galay iyo gobolooyinka ay ku yaalaan.
Wasiiradda ayaa sheegtay in tiradda imtixaanka dugsiyadda sare u fadhiistay ay ahayd 63 dugsi sare, waxaanay ardaydu dhamayd 5,842 arday, waxaana gudbay 5,645 arday, halka saddex arday dhaceen, isla marakana 168 arday aanay galin imtixaanka, 26 no grade ay ahayd (laga calaamadiyey).
Dugsiyadda dhexe ayaa iyana waxa imtixaanka u fadhiistay 11,626 arday, 10,669 arday ayaa gudbay, 531 arday way hadheen, 407 may galin, 19 waa No Grade , waxaanay ka koobnaayeen 218 dugsi dhexe oo ku kala yaalla goboladda oo dhan.
Wasiirka waxbarashadda ayaa uga mahadcelisay ardaydii dadaalka dheeraadka samaysay iyo waalidkood, waxa kale oo ay u mahadcelisay maamulada gobolada qaarkood oo ay xustay inay awood dheeraad ah galiyeen waxbarashadda iyo inay natiijo fiican keenaan.
Sidoo kale, waxa dugsiyadda sare ee Somaliland ugu sareeyey imtixaanka shahaadiga ardayga magaciisa la yidhaa Maxamuud Muuse Cali Cige oo dhigta dugsiga gaarka loo leeyahay ee NUURADIIN, halka dugsiyadda dhexana uu ugu sareeyey Mustafe Ismaaciil Maxamed Cismaan oo dhigta dugsige dhexe ee Nuuraadiin.
Sanadkan waxa kaalmaha ugu sareeyey galay dugsigan Nuuradiin oo ah dugsi gaar loo leeyahay, waxaana kaalmaha hore ka muuqan dugsiyada dawladda, taas oo ceeb ku ah wasaaradda waxbarashadda in dugsiyadda gaarka loo leeyahay xaga waxbarashadda kaga horeeyaan, maadaama oo sanadihii hore dugsiyada dawladdu ay kaalmaha hore gali jireen.
Inta badan dugsiyadda Somaliland ayaa ku tartama ka mid noqoshadda tobanka Arday ee ugu sareeye imtixaanka shahaadiga ah, haseyeeshee wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in ardayda dugsiyada dawlada dhigataa ay dhibco wanaagsan keeneen una badan yihiin darajadda A-da.
Dugsiyada dawladda maamusho ayaa inta badan lagu dhaliilaa inay ka dadaal yar yihiin kuwa gaarka loo leeyahay, maadaama oo mushahar ku filan aan la siin macalimiinta, isla markaana macalimiinta ugu wanaagsani ay dhigaan dugsiyada gaarka loo leeyahay, taasinna ay keento in mar walba laga tayo fiicnaado dugsiyada dawladda ama kaalmaha hore ku bataan dugsiyadda gaarka loo leeyahay.
Dhinaca kale, dugsiga sare ee SOS ee magaaladda Sheekh oo la fadhiista imtixaanka shahaadiga ah dugsiyada Somaliland, ayaa gaar loo qiimeeyaa, maadaama dhibco aad u sareeya ka keenaan imtixaanka, isla markaana ay ku jiraan dugsi hoy ah oo ay wax baraan macalimiin ajanabi ah, waxaana dhigta dugsigan ardayda ugu saraysa imtixaanka dugsiyada dhexe ee Somaliland.